Ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ gbaa video, ị chọrọ a raara onwe ya nye video igwefoto, ma ugboro ịga na na. Ekwentị mkpanaaka nwere ike idekọ na-akpụ akpụ ihe oyiyi, m kpọrọ asị na-ezo aka ọtụtụ n'ime ha dị ka video, n'ihi na afọ ugbu a, ma na biakwa obibia nke Cheta 3 na anụ na nwunye, gị ugbu a nwere mobile ngwaọrụ na elu nkọwapụta video ndekọ ike karịa na kasị raara onwe ya nye ngwaike. N'ezie, n'elu ya anya na-etinye aka n'ihe semiprofessional ngwaahịa dị ka Canon 5D mkIII maka video mmepụta. Ma, ọ bụ n'ezie na mfe? Ka nwere anya na ihe na-agụnye filming na emeghari a 4K clip on a Galaxy Cheta 3.
Nzọụkwụ mbụ i kwesịrị ime gbaa gị nkiri na 4K bụ iji nweta ntọala nri na Cheta. Site na ndabara ọ Records na 1080p, otú mbụ ị ga-mkpa na-aga n'ime video taabụ na ntọala na-agbanwe ihe video size-ezu 3840x2160 mkpebi.
Ugbu a, na a na-eme, e nwere ihe ụfọdụ na-maara nke. Firstly, 4K video naanị ike gbara na akpaaka mode, nke mere na bụ mma nke ukwuu ya dị ka ihe nhọrọ na-aga, gị ịtọ na mkpebi na pịa ndekọ. Nke abuo, na nke a bụ nnọọ ihe a nnukwu onye, ​​e nweghị video stabilization na 4K ma. A na-eme na-agbapụ a tricky atụmanya na-achọ ime atụmatụ ụfọdụ, n'ihi ya, maara na nke ndị na-agaghị emeli na na, handheld, nnukwu mkpebi nwere ike exacerbate obere mmegharị na-erukwa na mgbe agbapụ n'ezie mesie ha na playback.
Ọ bụkwa uru arịba ama na mgbe agbapụ 4K na Cheta, na ị chọrọ ọtụtụ nke ìhè, na ala ìhè ọnọdụ nsonaazụ nwere ike ịbụ ihe na-erughị ị ga-atụ anya ya.
Na a bit nke chioma, ị ga-ejedebe na obere video dị ka onye a.
Edezi gị footage
Ugbu a, i nwere ụfọdụ footage, ị ga-chọrọ dezie ya. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ nke edezi video footage si n'ebe, ma ọkacha mmasị m na otu onye bụ AndroVid Video Editor. E nwere uru na ọghọm niile mma Android dabeere editọ, ma onye a na-abia a mma itule maka m.
Ya mere, ị nwere gị nchịkọta akụkọ, na ị nwere gị clip, ugbu a, ihe?
Nzọụkwụ mbụ bụ mbubata footage n'ime ndị nchịkọta akụkọ. Ebe a ị na-enweta na film akara imeghe elu nchọgharị na-aga gị họọrọ footage.
Ahọpụta ya ga mbubata ya n'ime Androvid ebe ọ ga-amalite ebre, nnọọ otú ị bụ n'aka na ọ bụ ihe ziri ezi onye!
Ịkwụsịtụ na playback eweta elu menu na n'elu, dị ka ị pụrụ ịhụ na e nwere ọtụtụ nhọrọ, ka nwere anya na onye ọ bụla na zuru ezu.
Malite site n'aka ekpe, mbụ nhọrọ bụ Kpaa. Ọkụkụ na button-ewe gị a dị mfe interface ka anyị pụrụ ịhụ, na ọ na-arụ ọrụ dị nnọọ ka naanị.
Ị dị nnọọ nwere ịdọrọ abụọ nrịbama ka ihe ebe ị chọrọ ka ewepụtụ video, mgbe ahụ, see scissor na akara ngosi na n'elu nri nke na-eweta a interface.
Ugbu a, ị nwere ike họrọ na-họrọ ma na tụfuo nsọtụ abụọ, ma ọ bụ na-na nsọtụ na tụfuo n'etiti bit. Ọ bụ n'ezie na mfe.
Ọzọ elu anyị kewakwara abụọ. Nke a bụ nnọọ dị ka Kpaa ma nwere ma otu nhọrọ mgbe na video usoro iheomume. Ebe ọ bụla ị na-edebe na bụ isi nke na footage na-bee n'ime abụọ dị iche iche na obere vidiyo.
Na ndị ngwá ọrụ abụọ na jikota ngwá ọrụ anyị ga-ele anya na mgbe e mesịrị i nwere ike mara mma nke ukwuu ime ihe nile nke mfe edezi na ị ga-achọ ime na gị android ngwaọrụ, ma e nwere ndị ọzọ nhọrọ ebe a.
Ọzọ elu bụ jidere. Nke a-enye gị ohere jidere a etiti nke gị video, na ọ bụ nanị a bụrụ na nke ịkwụsịtụ playback na n'ókè ị chọrọ na ọkụkụ igwefoto bọtịnụ. Na ịpị ya ọzọ mgbe a ijido ewe a ogbugba nke ọzọ etiti tinyere, na mgbe ị na ihe ole na ole i nwere ike bulie otu na mbubata ya kpọmkwem dị ka gị akwụkwọ ahụaja ka ị ga-achọ ma ọ bụ ịkọrọ ya na-elekọta mmadụ media site na ngwa.
5. Audio naanị
Ọdịyo button bụ incredibly bara uru n'ihi na ụdị ụfọdụ nke footage, na ọ na-atọghata clip n'ime audio naanị.
6. Tinye Music
The Add Music Button-enye gị ohere ịgbanwe na mix ọdịyo na gị clip.
Ị nwere ike họrọ a ọhụrụ mpempe ọdịyo, na ịhazie olu nke ma ndị mbụ na ọhụrụ ọdịyo egwu dị ka ị chọrọ, ọ bụ ezi ọkaibe na-akpali mmasị ịhụ na a ngwaahịa nke ụdị.
Ederede button enye gị ohere tinye ederede n'ime gị clip, ị nwere ike ịhọrọ size, na agba na ọnyịnye nke ọ bụla ederede ị chọrọ niile n'ime ndị dị mfe interface n'okpuru.
Great maka agbakwunye na ọnọdụ ndetu na na.
Na-esote onye a bụ mmetụta button, ụfọdụ n'ime ndị a bụ nanị dị bụrụ na ị nwere Pro version nke software nke adọta obere ego, na free version bụ na-enweghị nhọrọ ebe a Otú ọ dị, ị ka nwere oke nke iri na abụọ ma ọ bụ otú mmetụta gụnyere Mirror, nke enyo image, Sepia nke na-enye ya na ndị agadi foto anya, nakwa dị ka nhọrọ ịgbakwunye blur, a vignette, nkọ na na. Ụbara nhọrọ iji nweta ihe, ma ọ bụrụ na ị maghị, ndụmọdụ kasị mma bụ ịgbalị na onye na-ahụ ihe ya anya ka!
Tọghata-enye gị ohere iji tọghata gị okokụre masterpiece ghọọ onye dị iche format, mkpebi na àgwà ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Na mkpebi si 160p elu, a usu formats dị ka hụrụ n'okpuru na a oke nke atọ àgwà ntọala ị pụrụ ịchọta zuru okè nke faịlụ size na mmepụta maka ihe ọ bụla ngwa.
Ikpeazụ edezi nhọrọ ebe a bụ Bugharia button, a-enye gị ohere bugharia ma ọ bụ tụgharịa video na otu button, nnọọ uru na nwere ike ịmepụta ụfọdụ-akpali nnọọ mmasị mmetụta.
Ikpeazụ buttons on a na ihuenyo bụ Share nhọrọ na-enye gị ohere iji gị mmadụ media adabere kesaa gị video, na Ama button na-enye gị usoro, mkpebi, size, faịlụ ụdị na oge nke ahọrọ clip, a Gbanwé aha button na na-ahapụ gị nyegharịa faịlụ, bara uru ma ọ bụrụ na i dezie ya ọtụtụ, na n'ikpeazụ a Nhichapụ button ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ ya.
Back to isi ihuenyo anyị na-ahụ ikpeazụ edezi ngwá ọrụ na ngwa, na nke ahụ bụ jikota. Nke a na-anọchi anya obere akwụkwọ clip icon, na dị ka mgbe dị mfe iji. Nanị enweta na jikota, na ị na-n'ihu na ihuenyo n'okpuru.
Kpatụ filmstrip na akara ngosi na ọ na-ewe gị ka họrọ a video mkparịta ụka, nke bụ ihe unu na-, họrọ mbụ clip.
Nke a na ahụ na-egosi na n'etiti, na i nwere ike wee tinye a video ma n'ihu ma ọ bụ mgbe ya. Etinye ọzọ video ke ziri ezi ebe, ma ị nwere ike ọzọ ikwugharị a bụrụ na ị chọrọ, ruo mgbe ị nwere niile mkpachị ị chọrọ na nri iji. Mgbe ahụ, ọ bụ ihe dị nnọọ a okwu nke tapping na akọrọ na n'elu aka nri na-ekwu na ị na-mere, na ngwa ga Stitch gị mkpachị ọnụ maka gị.
Na ndị ngwaọrụ ọ bụ n'ụzọ kwụ ọtọ dezie ọhụrụ gị footage, kewaa ya, soro ya na a dị iche iche iji, na ihe ọ bụla ọzọ pụrụ ịdị gị mkpa. Edezi na-aga dịtụbeghị mfe otú ahụ.
Top 10 4K Video edezi Software na 2015
4 Atụmatụ-amarakwa banyere Samsung Ringtone MP3
3 Ụzọ ndabere Samsung Galaxy S4
Nyefee Music si iPod ka Samsung Galaxy
Olee otú Play WAV Files na Samsung Galaxy S5, S4, S3, S2, S
Olee otú iji tọghata ọ bụla Video ka Galaxy S4 na High Quality
Olee otú iji tọghata Video ka Galaxy Cheta
> Resource> Samsung> Olee otú iji Gbaa na dezie a 4K Video on Galaxy Cheta 3